हिमालयन ब्राण्डका कृषि उत्पादन विदेशमा आकर्षण बढ्यो « Sahakari Nepal
हिमालयन ब्राण्डका कृषि उत्पादन विदेशमा आकर्षण बढ्यो
प्रकाशित मिति : 13 February, 2015 7:45 am
काठमाडौं, फागुन १ । दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्राक्टिस म्यानेजर मार्टिन भान न्युकुपले नेपालको भौगोलिक बनोटले प्रदान गरेको प्राकृतिक विविधतालाई अवसरका रुपमा लिई “हिमालयन ब्रान्ड” का कुनै पनि कृषि उत्पादन गरी निर्यात गरे अन्तराष्ट्रिय बजारमा ती वस्तुहरु फास्ट सेलिङमा जाने बताउनुभएको छ । आफ्नो कार्यकालको सुरुमा पहिलो पटक नेपाल आएका न्युकुपरले कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालसहितको प्रमण्डलसँंग आज बिहान भेटवार्ता गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले कृषि पर्यटनलाई समेत नेपालले बढाउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले पश्चिमी मुलुकहरुमा नेपाली उत्पादनलाई खोजीखोजी किन्ने गरिए पनि नेपाली उत्पादन भने पाउन कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल विश्वबै बेग्लै किसिमको भौगोलिक विविधता भएको एक मात्र मुलुक भएका यसका उत्पादनले अन्तराष्ट्रिय बजारका कसैसँंग पनि प्रतिष्पर्धा गर्नपर्दैन ।
न्युकुपरसहित दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी दक्षिण अफ्रिका क्षेत्र जान लागेका अर्का प्राक्टिस म्यानेजर सिमोन एहुई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । एहुईले नेपाल सरहकारले कृषि क्षेत्रका हासिल गर्दै आएको उपलब्धीको सराहना गर्नुभयो ।
भेटवार्ताका क्रममा दुवै म्यानेजरले नेपालमा विश्व बै.कको आर्थिक सहयोगमा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्तनलित आयोजनाहरुले प्राप्त गरेको सफलताप्राति खुशी व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव खनालसहित सहसचिवहरु डा. राजेन्द्र अधिकारी तथा योगेन्द्रकुमार कार्कील आफ्ना मन्तव्य तथा सुझाव राख्नु भएको थियो ।
मन्त्रालयको प्रमण्डलमा विभिन्न आयोजनाका आयोजना निर्देशकहरुको पनि सहभागिता थियो । विश्व बैंकका तर्फतबाट दुईजना प्राक्टिस म्यानेजरसहित व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका लागि टास्क टिम लिडर प्याट्रिक भेरिसिमो,वरिष्ठ ग्रामीण विकास विज्ञ डा. पूर्ण क्षेत्रीलगायको सहभागिता थियो ।